၅.၅ ဘီလီယံယူရိုကို Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးအတွက်စုဆောင်းထားပါတယ်။
Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကာကွယ်ရန်ကာကွယ်ဆေးများတီထွင်ရန်တည်ထောင်ခဲ့သော Global Vaccine Alliance သည်၎င်း၏ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးညီလာခံကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဥရောပသမဂ္ဂအပြင်ဥရောပ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ နော်ဝေး၊ ကနေဒါ၊ ဂျပန်နှင့်ဆော်ဒီအာရေဗျစသည့်နိုင်ငံများဖြစ်သည် [ပို ... ]
နောက်ဆုံးမိနစ် - ဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်နှင့်အလှပြင်ဆိုင်များမေလ ၁၁ ရက်ဖွင့်လှစ်
သမ္မတကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးအပြီးတွင်သမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ကသူ၏ပုံမှန်အစီအစဉ်ကိုကြေငြာခဲ့သည်။ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကြေငြာချက်အရမေလ ၁၁ ရက်နေ့တွင်ဆံသဆိုင်၊ ဆံပင်အလှပြုပြင်သူများနှင့်အလှပြင်ဆိုင်များကဲ့သို့သောလုပ်ငန်းများစတင်လည်ပတ်မည်ဖြစ်သည်။ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှအသေးစိတ် [ပို ... ]
၀ န်ကြီးအဖွဲ့အစည်းအဝေးအပြီးတွင်သမ္မတအာဒိုဂန်၏ထုတ်လွှင့်မှုအရ ၆၅ နှစ်ကျော်အုပ်စုအတွက်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုတဖြည်းဖြည်းရုပ်သိမ်းလိုက်သည်ဟုဆိုသည်။ အသက် ၆၅ နှစ်ကျော်သောကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကန့်သတ်ချက်များရှိသည် [ပို ... ]
အိမ် ၇ မကအိမ်ပြန်ချိန်သတ်မှတ်ချက်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်
သမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ၏တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့်ကြေငြာချက်အရညမထွက်ရအမိန့်များကိုယခုအပတ်တွင်ဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ပြည်နယ် ၇ ခုတွင်ညမထွက်ရအမိန့်ကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပြီး၎င်းပြည်နယ်များသို့သွားရောက်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ [ပို ... ]
Single Double လျှောက်လွှာကို Istanbul Ankara နှင့် Izmir Taxis တွင်ဖယ်ရှားခဲ့သည်
ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများအရ coronavirus ကပ်ရောဂါကူးစက်မှုအန္တရာယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲရန်၊ လူမှုရေးအထီးကျန်မှုကိုသေချာစေရန်၊ လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပျံ့နှံ့နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Coronavirus လူနာများအတွက် Quarantine အကြံပြုချက်များ
သင်၏ Covid 19 စစ်ဆေးမှုသည်အပြုသဘောရှိသော်လည်းသင်၏ရောဂါလက္ခဏာများသည်နူးညံ့သည်သို့မဟုတ်သင်အလွန်ခံစားရသည်။ ဒီတော့ဒီအခြေအနေမှာမင်းဘာလုပ်သင့်လဲ။ ကျွမ်းကျင်သူများကအိမ်၌ quarantine ဖြစ်စဉ်ကိုသုံးမည့်လူနာများ [ပို ... ]
မောင်းသူမဲ့မြေပြင်မော်တော်ယာဉ်ဒီဇိုင်းဒီဂရီတူရကီနှင့်အတူဆောင်ခဲ့သော ITU Rover ရေးအဖွဲ့,
ITU Rover အဖွဲ့သည်၎င်း၏မောင်းသူမဲ့မြေပြင်ယာဉ်နှင့်အတူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအင်္ဂါဂြိုဟ်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှစီစဉ်သော University Rover Challenge ပြိုင်ပွဲတွင် ၃၆ သင်းတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။ ဂြိုဟ်ရှာဖွေရေးစက်ရုပ်အပေါ်သူ၏အလုပ်ကိုဆက်လက် [ပို ... ]
Eskişehir OBS တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများဆက်လက်တည်ရှိနေသည်
Eskişehir OSB ဘုတ်အဖွဲ့၏ဥက္က္ဌ Nadir Küpeliကစက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့် OIZ တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန်စီမံခန့်ခွဲမှုအနေဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မတကူပီလီကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်သာယာဝပြောမှုအတွက်။ [ပို ... ]
တူရကီတင်ပို့သူများညီလာခံ (TIM), ပထမလေးလအတွင်းစုစုပေါင်း 45 ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းပြသနေစဉ်ယခင်တစ်လအပေါ် Eskisehir ၏ပို့ကုန်ရာခိုင်နှုန်းဧပြီလတင်ပို့မှု 12 တို့ကဖြန့်ချိအချက်အလက်များအရသိရသည်။ Eskişehirဖွဲ့စည်းထားပါသည် [ပို ... ]
Karakoyun တံတားဖလှယ်မှုနှင့် Viaduct ပြီးစီး
Sanliurfa ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုကိုများစွာသက်သာစေမည့် Karakoyun တံတားလဲလှယ်ရေးနှင့် Viaduct ကိုပြီးစီးပါပြီ။ lanlıurfaမြို့တော်ဝန်မြို့တော်ဝန် Zeynel Abidin Beyazgül၏ညွှန်ကြားချက်သည် Corona ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပွားသော်လည်းကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲများအတိုင်းအတာအတွင်း [ပို ... ]
Corona ဗိုင်းရပ်စ်လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်ကိုပြတ်သားစွာအကောင်အထည်ဖော်သည့်အနေဖြင့်အိမ်ပြန်ချိန်သတ်မှတ်ချိန်မတိုင်မီEskişehirမြို့တော်စည်ပင်သာယာသည်အခြားတစ်ဖက်တွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဤအခြေအနေတွင် ESTRAM နှင့်အတူ [ပို ... ]
Konak inရိယာရှိ Tarsus Çamlıyayla Yolu လမ်းဆုံအတွက်အစီအစဉ်သစ်
တာရှုမြို့ရှိ Mersin Metropolitan မြူနီစီပယ်အတွက်အစီအစဉ်အသစ်များကို ဆက်လက်၍ ယာဉ်ကြောစီးဆင်းမှုကိုလုံခြုံစွာနှင့်လျင်မြန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ တာ့စ်စ်နှင့်lamlıyaylaခရိုင်များနှင့်လည်းဆက်သွယ်နိုင်သည် [ပို ... ]
ScientificBB သိပ္ပံကော်မတီ - 'ပွဲပြီးနောက်ပုံမှန်အဆင့်များကိုရပ်တန့်ပါစေ'
IBB COVID-19 သိပ္ပံအကြံပေးဘုတ်အဖွဲ့သည်မေလ ၃ ရက်၊ တနင်္ဂနွေတွင်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးပြီးနောက် Ramadan နှင့်မတိုင်မီအစ္စတန်ဘူလ်တွင်ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန်ရန်လိုအပ်သည်။ [ပို ... ]
IMM ၏ဆိုင်းငံ့ငွေပေးချေမှုကင်ပိန်းစတင်ခဲ့သည်! ဒါကြောင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ
B ဘီဘီစီဥက္ကEk္ဌ Ekrem pandmamoğluကသူနာပြုများအား“ ဆိုင်းငံ့ငွေတောင်းခံလွှာ” လျှောက်လွှာကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာအသေးစိတ် http://www.ibb.gov.tr အမ်မိုဂလူက၎င်းကိုအောက်ပါစကားများမှတဆင့်ရောက်ရှိနိုင်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ [ပို ... ]
တူရကီကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏အရေးပါသောအဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုသည်သံချပ်ကာတပ်ဆင်ထားသောမိုဘိုင်းနယ်စပ်လုံခြုံရေးမော်တော်ယာဉ်Ateşအတွက်တပ်ဖွဲ့များကိုပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သံချပ်ကာမိုဘိုင်းနယ်စပ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးကို Katmerciler နှင့် ASELSAN တို့ ပူးပေါင်း၍ စတင်ခဲ့ပြီးကာကွယ်ရေးနည်းပညာကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
ပထမ ဦး ဆုံးစီးပွားဖြစ်ပျံသန်းမှုမှာဆမ်းစ် Sivas Kalınမီးရထားလမ်းမှဖြစ်သည်
Sivas-Samsun, တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးသံမီးရထားလမ်းခေတ်မီဖို့အလုပ်၏5အကြောင်းကိုနှစ်ပေါင်းပြီးနောက်, လမ်း၏တဦးတည်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ TCDD ကို ၂၀၁၅ ဇွန် ၁၂ ရက်တွင်ပိတ်ခဲ့ပြီးအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်တည်ဆောက်ပုံအဆင့်အတန်းများမြှင့်တင်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ ဦး စားပေးပြောင်းလဲမှုများ .. ! ဒါဇင်ပေါင်းများစွာသောစီမံကိန်းများပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည် .. !
CHP နီဂတ်လက်ထောက်Ömer Fethi Gürerသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များအတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာနမှအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သောစီမံကိန်းများကိုယူဆောင်လာခဲ့သည်၊ သို့သော်အချိန်ကြာမြင့်စွာအသုံးမပြုရသေးသောမေးခွန်းများအား TBMM ၏အစီအစဉ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုတင်သွင်းခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးGürerရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုတုံ့ပြန် [ပို ... ]
ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်စျေး ၀ ယ်စင်တာ Cumhuriyet Street Nostalgic Tram သို့မစ်ရှင်
Bursa ၏ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ဥက္ကBur္ဌ Bursa Hayrettin Eldemir နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားပြောဆိုမှုတွင်သူသည် Bursa ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းနားလည်မှုအပြင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ထိတွေ့စေမည့်အဆိုပြုချက်များအကြား Cumhuriyet လမ်းရထားလမ်းအတွက်သီးခြားစာမျက်နှာတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ Söze…“ ဒီလမ်းရထားကိုယခုအချိန်အထိအသုံးမပြုရသေးဘူး” ဟုခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်ငန်းစတင်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
3 Touch ဖြင့် Bursa ၏အသွားအလာနှင့်ခရီးသွားလာရေးကိုသက်သာစေရန်အကြံပြုချက်
ရှေ့တွင်ရှိသောအမှန်တရားမှာဘာဆာသည်ပင်လယ်သဲနှင့်နေရောင်အားလပ်ရက်အတွက်အားရဖွယ်မြို့မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၎င်း၏အနှစ် ၈၅၀၀ သမိုင်းနှင့် Ottoman ၏ပထမဆုံးမြို့တော်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းသည်စစ်မှန်သောခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီကအပူခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ကျန်းမာရေးခရီးသွားလုပ်ငန်း [ပို ... ]
DHMI ကကြေငြာသည်။ Atatürkလေဆိပ်ပြေးလမ်းများအဘယ်ကြောင့်ပျက်စီးရကြောင်းကြည့်ရှုပါ။
နိုင်ငံတော်လေဆိပ်အာဏာပိုင်အဖွဲ့၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသည်Atatürkလေဆိပ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်လေယာဉ်ပြေးလမ်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေငြာခဲ့သည်။ ထိုကြေညာချက်တွင် ၁၄ ဘီလီယံလီယာလေယာဉ်ပြေးလမ်းသည်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်သို့ဆင်းသက်ခြင်းနှင့်လေယာဉ်ဆင်းခြင်းလုပ်ငန်းများအားဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ [ပို ... ]
Halkbank မှ 'တက်ရောက်သူပံ့ပိုးမှု - အသေးစားစီးပွားရေးဘဝဘဝရေချေးငွေ'
ကမ္ဘာအနှံ့ကူးစက်ရောဂါအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည့် Corona ဗိုင်းရပ်စ်ကိုတိုက်ဖျက်သည့်နယ်နိမိတ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်၊ စက်မှု၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် [ပို ... ]
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ကြီးဌာနAprilပြီလပို့ကုန်ကိန်းဂဏန်းများကိုကြေငြာခဲ့သည်
GTS ၏အဆိုအရexportsပြီလတွင်တင်ပို့မှုသည်ယခင်နှစ်အလားတူလနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၄၁.၃၈% ကျဆင်းခဲ့ပြီးဒေါ်လာ ၈ ဘီလီယံ ၉၉၃ သန်းသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့်အီးယူနိုင်ငံများဖြစ်သောကပ်ရောဂါကြောင့်အရေးကြီးသည် [ပို ... ]
TÜBİTAK SAGE ၏ Ankara Wind Tunnel မှ ၀ န်ဆောင်မှုများ
လေရဟတ်များသည်အရာဝတ္ထုများ၏လေထုစီးဆင်းမှုနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကိုစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုသည့်အခြေခံအဆောက်အ ဦး များဖြစ်သည်။ ဒီဇိုင်းများတွင်လေခွင်းအားနည်းသောလေ့လာမှုသုံးခုမှာကိန်းဂဏန်းဆိုင်ရာပုံစံပြုခြင်း၊ [ပို ... ]
တူရကီ၏ပထမဦးဆုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘော TCG ကစမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် Anatolia အတွက် Continues
TCG ANATOLIAN (L-400) Amphibious Assault Ship သည် F-35B တိုက်လေယာဉ်အားဝယ်ယူရန်မဖြစ်နိုင်ကြောင်းထင်ရသဖြင့် S-70B Seahawk DSH (ရေငုပ်သင်္ဘောကာကွယ်ရေးစစ်) ၏ရဟတ်ယာဉ်များကိုသာကျွန်ုပ်တို့ဘုတ်ပေါ်တွင်သာတပ်ဖြန့်နိုင်သည်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အစောပိုင်းက Deniz [ပို ... ]